ISagrada Familia-Uthotho olutsha lweNetflix | IBezzia
USusana godoy | 12/10/2021 14:00 | Iindaba
INetflix iyaqhubeka ukothuka ngamanye amaxesha. Kungenxa yokuba kuyinyani ukuba rhoqo rhoqo kusungulwa uthotho lwezindululo njengomxholo, kodwa kule meko inike isimangaliso esikhulu xa ibhengeza. Sagrada Familia. Olunye uthotho lwaseSpain olunomlingisi omkhulu kwaye kuncinci okwaziwayo ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ngokuqinisekileyo oluya kunika okuninzi ukuze uthethe ngalo.
Ukusukela ngoku iyenza kwaye zaziwa kuphela iinkcukacha ezimbalwa. Abanye babo kuphela kwinethiwekhi ethile yoluntu kunye nezinye zeentloko zokucinga. Kodwa kufanelekile ukukhankanywa kuba xa ndifika kwiscreen esincinci iya kuba luqhushululu, ngokuqinisekileyo. Fumana yonke into ngaye!
1 Ukumangaliswa kweNetflix
2 Ngoobani abalinganiswa abaphambili beSagrada Familia?
3 Ingcamango kaManolo Caro
Kuyinyani ukuba iNetflix iza kusothusa ngamanye amaxesha kuba inomxholo obanzi ngokwenene. Phakathi komdlalo bhanyabhanya kunye neemovie, ngamanye amaxesha siyakhathazeka ngenxa yokuba asazi ukuba sikhetha eyiphi. Kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha silinde ii-premieres kuba sele zibhengezwe liqonga, ukuze sonke senze uhlobo lwe-ajenda. Kodwa kule meko khange kube njalo kwaye ngokungathi ibingummangaliso wokuzalwa, kufika iindaba zokuba uthotho lweSpanish yiprojekthi yeqonga. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikwanobuso obudumileyo kwindawo yesizwe kwaye bavela ekuvuneni ezinye iimpumelelo ezininzi.
Ngoobani abalinganiswa abaphambili beSagrada Familia?
UNajwa Nimri Ungomnye wobuso obaziwa kakhulu kwindawo yesizwe. Waqala ukusebenza noSantiago Segura kodwa waphinda watsiba kunye no-Amenábar, de kwafika enye yeendima zakhe ezaziwayo kuye zathi `` Vis a Vis ''. Ewe asinakho ukuwalibala amaxesha awajoyine ngawo 'La casa de papel'. Ngoku uyakothusa iSagrada Familia, siqinisekile. IAlba Flores lelinye lamagama amakhulu afumana amandla kwaye akumangalisi. Ukongeza ekubeni liqabane likaNajwa, ngoku ubuyela ekubeni yinxalenye yezona zinto ziphambili ezikwisikrini esincinci. Zombini ezi 'Vis a Vis' kunye 'neLa casa de papel' zimkhokelele ekubeni aphumelele amabhaso aliqela.
Kukwakhona ukuba abadlali beqonga benziwe nguCarla Campra oselula esimbone 'kwidayari eyimfihlo yomntu ofikisayo' nakwenye indlela. 'IiFugitivas' okanye 'imnimas' zezinye zezihloko apho sibonileyo uIván Pellicer esebenza. Ukongeza, omnye wabahlobo bakhe abakhulu nguMacarena Gómez esimaziyo ikakhulu ngendima yakhe njenge ULola ku 'Lowo Uzayo', kodwa unembali ende emva kwakhe.
Ingcamango kaManolo Caro
Ukongeza kubo bonke ubuso obaziwayo, obungembalwa, UManolo Caro upapashe kwiinethiwekhi zabo. Ukuchaza ukuba uluvo lokwenza umsebenzi onje uvelaphi. Kubonakala ngathi ayisiyonto intsha, kodwa yinto enomdla ngakumbi kuba ngaphezulu kweminyaka emibini wayenombono kunye nomnqweno wokukwazi ukunika uluntu oko wayenako engqondweni yakhe. Ewe, unoxanduva 'lweLa Casa de las Flores', ebiyenye yeempumelelo ezinkulu ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukusuka kwinto ebonakala ngathi, ukurekhodwa sele kuqhubeka kwaye kuyenzeka eMadrid. Ukusukela oko zaphuma iindaba zolo ngcelele, wonke umntu ulindele iindaba, ukuze akwazi ukonwabela enye into, ukuchukumisa iyelenqe okanye abalinganiswa bakhe ngokubanzi. Ngaba uza kuyibona xa iphuma?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » ISagrada Familia: Uthotho lweNetflix eNtsha yaseSpain